सरकार चौबाटोमा राखिएको घोडाको बग्गीजस्तो : अर्जुननरसिंह केसी | Samaj Khabar
सरकार चौबाटोमा राखिएको घोडाको बग्गीजस्तो : अर्जुननरसिंह केसी
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बिना संशोधन पारित भयो । यसमा कांग्रेसको भूमिका गौण भएको हो ?
सरकार बहुमतमा हुन्छ । त्यहाँ संलग्न दलहरूको बीचमा विवाद हुन्छन् तर पनि उनीहरू बहुमतमा हुन्छन् । बहुमतबाट पारित गर्ने हो भने पारित हुन्छ । तर यो नीति तथा कार्यक्रममा वास्तविक धरातलीय यथार्थभन्दा लोकप्रियताको नाममा मनगढन्ते कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएको छ । यसलाई हामीले गम्भीररूपमा लिएका छौं र संसद्मा पनि आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका छौं । हाम्रो संस्थागत विकासको क्षमता जसरी क्षयीकरण हुँदै गइरहेको छ, त्यसलाई झन् बढावा दिनेगरी नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी हुँदा पनि विकास बजेट २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममा आएका मनगढन्ते कार्यक्रमहरू झुटका पुलिन्दाबाहेक अरु के हुन सक्छ ? यो मनगढन्ते कुरामात्र हो । यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सक्दैन । नेपालको इतिहासमा १४ वर्षपछि ०.७७ प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका तर्फबाट अहिले जुन खालको सपना बाँड्ने, भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ, त्यो निरर्थक छ, झुट हो । हामी त चाहन्छौ सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गरोस् । त्यसमा प्राथमिकताको दृष्टिकोणले, अहिलेको मुख्य काम के हो ? अहिलेको अवस्थामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले यही राष्ट्रिय आयको ११ प्रतिशतमात्र हिस्सा पाउँछन् । धनी र गरिबको बीचको खाडल एकातिर बढिरहेको छ, अर्कोतिर जनताहरू रोग, भोक र गरिबीको चेपुवामा परेका छन् । अहिले आपूर्ति व्यवस्था सहज भयो भनिएको छ । तर एक सिलिन्डर ग्यास लिन कसैको सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था छ । अहिले पनि भनेको समयमा डिजेल पाइरहेको छैन । त्यही डिजेल कालाबजारियाबाट लिने हो भने जति पनि पाइन्छ । र अहिले नेपालकै इतिहासमा पहिलोचोटी यो सरकारको नेतृत्वमा तस्करहरूको स्वर्गको रूपमा परिणत भएको छ । अर्थतन्त्र तस्करहरूले समानान्तर रूपमा चलाइरहेको अवस्था छ ।
भूकम्पपीडितहरूको अवस्था झनै दयनीय रहेको छ । उनीहरूले एउटा वर्षायाम र एउटा जाडो त जसोतसो बिताए फेरि पनि उनीहरू त्यस्तै अवस्थामा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । महिला, सुत्केरी, वृद्धवृद्धाहरूको अवस्था पनि त्यस्तै नाजुक अवस्थामा पुगेका छन् । अझै त्यसमा यो आगलागी तथा विभिन्न्न प्रकोपको सिकार पनि तिनै पीडितहरू भएका छन् । उनीहरूलाई जुनखालको ध्यान दिनुपर्ने हो त्यतातर्फ राज्यको पटक्कै ध्यान पुगेको छैन । भर्खरै हुम्लामा २५ जना मान्छे मरेको समाचार आएको छ । जाजरकोटदेखि त्यो क्षेत्रमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ । त्यसमा पनि सरकारको पटक्कै ध्यान पुगेको छैन । गाउँमा पानीका मुहानहरू सुकेका छन् त्यसको व्यवस्था अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा आकांक्षा र सपनाको पहाड खडा गरेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्नुभन्दा पनि जनताका तत्कालका समस्याहरू समाधान गर्नेतिर ध्यान दिनुप¥यो । जुन भएकै छैन ।
तपाईंको भनाइको मतलव नीति तथा कार्यक्रमले तत्कालका प्राथमिकता छुट्याउन सकेन भन्ने हो ?
प्राथमिकता एकातिर छ भने नीति तथा कार्यक्रम अर्कोतिर छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई गोलमटोल रूपमा प्रस्तुत गरेर सरकारले जनतालाई भ्रममा राख्ने काम गरेको छ । यसको कुनै व्यावहारिक पक्ष छैन । यसको ठाउँमा सरकारले सबैभन्दा पहिले प्राथमिकता निर्धारण गरेर भूकम्पपीडितहरूको लागि घरको पुनर्निर्माणको काम या जनताका दैनिक समस्याहरू समाधानतिर जानुपथ्र्यो । मूल्यवृद्धि, गरिबी बेरोजगारीदेखि लिएर सरकारको कार्यक्षमताको कार्य अभिवृद्धि गर्नेतिर केन्द्रित भएर कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो । तर जनतालाई झुक्याउनेभन्दा अरू केही छैन, नीति तथा कार्यक्रममा ।
नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि यसका सैद्धान्तिक पक्षमाथि प्रश्न उठाएका थिए । यसमा पनि कुनै संशोधन भएन, किन होला ?
यसमा हामीले संशोधन प्रस्तुत ग¥यौं । हाम्रो प्रस्ताव प्रक्रियागत रूपमा प्रस्तुत पनि भयो । हामी पराजित भयौं । हामीसँग संसद्मा बहुमत थिएन । त्यही कारणले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पारित भयो । प्रधानमन्त्रीजीले संशोधनमा उठेका कुराहरूलाई बजेटमा समावेश गर्छौं भन्नुभएको छ । त्यसमा हेरौं कति समावेश गर्नुहुन्छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा त मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गलाई यति धेरै चर्को नारा दिइयो । मध्यपहाडी राजमार्गको मेरै जिल्ला नुवाकोट खण्डको टेन्डर भएको छ तर काम हुँदैन । त्यस्तै राष्ट्रिय रणनीतिक सडक भनेर रानीपौवादेखि गल्छीसम्मको बाटोको पनि टेन्डर भएको छ अहिलेसम्म काम भएको छैन । अर्को बहुवर्षीय योजना भनेर पार्टी भन्ज्याङदेखि राउतबेसीसम्मको जुन बाटो हो त्यसमा पनि काम भएको छैन । यो त मैले मेरो जिल्लाका राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाको मात्र उल्लेख गरे । देशभर त्यस्तै छ । हुलाकी राजमार्गको कुरा भन्नुस् चाहे राष्ट्रिय महत्वको योजना भन्नुस् यी सबै कुनै कार्यान्वयनसम्म भएका छैनन् । त्यसैले पहिलो कुरा कार्यक्षमताको अभिवृद्धि, दृढ इच्छाशक्ति र व्यावहारिक योजनाले मात्र अहिलेको परिस्थिति सामना गर्न सकिन्छ नत्र अहिलेको सरकारले खाली लोकप्रियतालाई आधार बनाएर मान्छेलाई जुन रूपमा अल्मल्याउन खोजेको छ, तर मान्छेहरू सधैं अल्मलिँदैन । सरकारले बजेट नीति ल्याउँदा कार्यान्वयनमुखी बनाउन जरुरी छ ।
त्यस्तै स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा वैधानिक संकट तथा राजनीतिक सहमतिको बारेमा कांग्रेसले र सत्तारूढ पार्टी एमाओवादीले पनि प्रश्न उठाएको थियो । तर त्यसमा पनि कुनै संशोधन भएन । स्थानीय निकायको चुनाव सम्भव छ कि छैन ?
निर्वाचन आवश्यक छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको डेढ दशक भइसकेको छ । यसले स्थानीयस्तरमा विकास निर्माणका कामहरू रोकिएका छन् । निर्वाचनको सन्दर्भमा कहीँ कतै कसैको विमति होइन । तर सबैभन्दा पहिला त वैधानिक रूपमा त्यसमा चुनौतीहरू छन् । दोस्रो कुरा राजनीतिक रूपमा पनि समस्या छ । तराई मधेस अहिले पनि आक्रान्त छ ।
देशको ५० प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने भूभागलाई उपेक्षा गरेर हामीले स्थानीय निर्वाचनको मात्र कुरा गर्नु हुँदैन । त्यसको समाधान पहिले गर्नु पर्नेछ । त्यसकारण राजनीतिक सहमतिको एकातिर आवश्यकता छ भने अर्कोतिर वैधानिक रूपमा गाउँ विकास समिति (गाविस), नगर विकास समितिको सीमांकनको लागि आयोग गठन भएको छ । त्यसले रिपोर्ट नदिँदै निर्वाचन गर्ने कुरा कति व्यावहारिक र सम्भाव्य हुन्छ भन्ने कुरातिर सोच्दै नसोचेर निर्वाचन गर्छु भन्नु मुर्खता हो । अघिल्लो सरकारले पनि निर्वाचन गर्ने भनेको थियो । तर सम्भव भएन । यो पटक पनि त्यस्तै हुने सम्भावना छ ।
अहिले संसद्मा सरकार जस्तो विपक्षी, विपक्षी जस्तो सरकार भएको छ । अथवा प्रतिपक्षी रक्षात्मक सत्तापक्ष आक्रमक छ भन्ने गरिन्छ नि, तपाईंलाई के लाग्छ ?
त्यस्तो पटक्कै होइन । तर हाम्रो भूमिकामाथि न्याय गर्न नसकिएको भने पक्कै हो । हामीले भूकम्पपीडितहरूको लागि राष्ट्रिय नीति, पुराना नीतिलाई निरन्तरता दिनेसम्मको कामदेखि अहिलेका मनगढन्ते योजनाहरूको प्रतिकार गर्नको लागि संसद्मा जोडदार आवाज उठाएका छौं । तर त्यसका प्रक्रियाहरूलाई त स्वीकार गर्नैपर्छ, गरेका छौं । हामीले जुन दिनसम्म प्रक्रियाबाटै परिवर्तन गर्न सक्दैनौं त्यसदिनसम्म प्रक्रियालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा कांग्रेसको भूमिकालाई लिएर तपाईं आफैं सन्तुष्ट हुनुहुन्न, हैन ?
पहिलो कुरा त हामी लोकतन्त्रवादी भएको नाताले सरकार बनेको एक सय दिनसम्म उसका नीति, कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि छुट दियौं । निर्वाध रूपमा काम गर्न पनि दियौं । त्यसमा हामीले कुनै पनि विरोध गरेनौं । अर्को सय दिन हामी पार्टीको महाधिवेशनमा निरन्तर रूपमा लागिरह्यौं । त्यसपछि भर्खर सदन सुरु भएको छ । सदनमा हामीले आफ्ना विचारहरू प्रष्टसँग राखेका छौं । अर्को कुरा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका कसरी निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यो पनि गर्छांै ।
तर पार्टीको महाधिवेशन सकिएको पनि दुई महिना सकियो तर पनि खासै केही भूमिका देखिएको छैन त ?
हैन यो सदन सुचारु भएको कति दिन भयो र ? सदन सुरु हुनेबित्तिकै नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित भयौं । सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर गतिविधि गर्नु पनि भएन । त्यस्तै हाम्रो भारी असहमति हुँदाहुँदै पनि बजेटमा अवरोध गर्ने पक्षमा हामी छैनौं । त्यसपछि मात्र बल्ल हाम्रो गतिविधि हुनुपर्छ ।
भने पछि कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका देख्न जनताले साउन महिनासम्म कुर्नुप¥यो ?
हैन । किन साउन कुर्नुप¥यो र असारमा नै हुन्छ नि । जेठ १५ भित्र बजेट आइहाल्छ नि । बजेटमाथिको अवरोध लोकतान्त्रिक मान्यताविरुद्ध हुने भएकोले नै हामीले त्यसको प्रक्रियालाई स्वीकार गरेका हौं ।
यो सरकारलाई कांग्रेसले म्यादी सरकार भन्यो । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतन्त्रमा सबै सरकार म्यादी हुन्छन् भने । सरकार परितर्वनका लागि कांग्रेसले किन यति कमजोर प्रयास गरेको ?
प्रतिपक्षी भनेको सधैं प्रतीक्षारत सरकार पनि हो । त्यसकारण राजनीतिक रूपमा सम्भव भएसम्म सरकार परिवर्तनको लागि प्रयास गर्छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । यसै सन्दर्भमा एनेकपा माओवादीले हाम्रो नेतृत्वमा सरकार स्वीकार गर्ने हो भने हामी एमालेसँग अलग हुन्छौं भन्ने प्रस्ताव आएको हो । त्यसपछि हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेका हौं । तर त्यसलाई स्वीकार गर्ने क्रममा अलिकति कमजोरी भएकै हो । उनीहरूलाई सरकारबाट अलग बनाइसकेपछि यो कुरा बाहिर खुला हुनुपथ्र्यो । त्यसमा अलिकति हतार भयो । यसमा कसैलाई दोष दिनुपर्ने कुरा पनि छैन । कांग्रेसले होइन भनिरहनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । अब उनीहरूको बीचमा जुन नौ बुँदे सहमति भएको छ त्यो संक्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावना विपरीत छ । त्यसका विरुद्ध मानवअधिकारवादीहरूले पनि आवाज उठाइरहेका छन् । पीडितहरू पीडित हुने तर पीडकहरू उन्मुक्त हुने जुन सम्झौतामार्फत गराउन खोजिएको छ त्यो सम्भव छैन । त्यसको अर्थ शान्ति प्रक्रियाको कुराहरूलाई उधिनेर फेरि द्वन्द्वमा धकेल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । त्यसमा कांग्रेसबीचको बाटो अपनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको छ । यसमा गम्भीर पनि छ ।
तपार्इंले एमाले–एमाओवादीबीचको नौ बुँदे सहमतिको कुरा गर्नुभयो । त्यसमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई पनि सत्य निरूपण आयोगमा फिर्ता लैजाने भन्ने आशय उल्लेख गरिएको छ । यसबारेमा तपाईंहरूको धारणा के हो ?
हो । सर्वोच्च अदालतको जुन असाधारण क्षेत्राधिकार छ, त्यसलाई कुनै पनि सम्झौताले रोक्न सक्दैन । त्यो संवैधानिक अधिकार हो । संवैधानिक उपचारको हक भनेको नै बिना रोकतोक अदालत जान पाउने अधिकार हो । हरेक व्यक्तिको सीमालाई कुनै पार्टीहरूबीचको सम्झौताले रोक्न सक्दैन । त्यसको नाममा फेरि पनि द्वन्द्वकालीन घाउलाई बल्झाउने भन्ने पनि होइन । त्यसको बीचको बाटो भनेको पीडकले पनि उन्मुक्ति नपाओस् र पीडितले पनि न्याय पाएको महसुस गरोस्, त्यस्तो खालको राजनीतिक सुझबुझसहितको बाटो निकाल्नुपर्छ । तर यो सम्झौता त संवैधानिक आधारहरूलाई चुनौती दिने, संक्रमणकालीन कानुनलाई तोड्ने, पीडकलाई सम्मानित गर्ने र पीडितहरूलाई अपमानित गर्ने खालको छ । अर्को कुरा, अलिखित खालको सम्भmौतामा केही समयपछि अथवा बजेट पनि माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने खालका अभिव्यक्ति आएका छन् । त्यो त्यसै आएको छैन । स्वयम् उपप्रधानमन्त्रीहरूबाट आएको अभिव्यक्ति पनि हो । अव त्यो कति कांर्यान्वयन हुन्छ । मैले संसद्मा पनि उहाँकै उखान टुक्कालाई जोडेर उहाँले एकचोटी के भन्नुभएको थियो भने, ‘सिनेमामा हिरो हिरोइन हुन्छन् तिनीहरूले लभ गर्छन् के के गर्छन् अनि सिनेमा पनि सकिन्छ, हिरो एकातिर हिरोइन अर्कोतिर के के लभ न सब, त्यस्तै माओवादी र एमालेको सम्बन्ध पनि त्यस्तै छ ।’ अब यो पनि त्यस्तै हुने हो कि † खड्कप्रसादजीको एउटा खड्को टरेपछि पछि के हुने हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । तर अहिलेको परिस्थिति भनेको हामी अत्यन्त जटिल अवस्थामा छौं । अहिलेको राष्ट्रिय अवस्था भनेको अत्यन्त तरल अवस्था हो । र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कौशल देखाउनुपर्ने हो त्यसमा असफल छौं । छिमेकी मुलुकहरूको सम्बन्ध त्यत्तिकै उतारचढावपूर्ण छ । भारत र ईयूको विज्ञप्ति हेरांै । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले नेपाललाई असफल मुलुकततिर उन्मुख भनेर उल्लेख गर्न थालिसकेका छन् । र त्यतिमात्र होइन अस्ति न्युयोर्क टाइम्सले नेपालको राजनीतिक हानिकारक अथवा यहाँका हानिकारक राजनीतिको बारेमा लामो विश्लेषण पनि गरेको थियो । यसले देशको छवि गिरेको छ ।
त्यस्तै जुन दिन माओवादी र एमालेबीच सरकार लम्ब्याउने सहमति भयो त्यही दिन राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण स्थगित र भारतका लागि नेपाली राजदूत फिर्ता गर्नुपर्ने कारण के हो ? सरकारले राजदूत फिर्ता गर्न सक्छ तर एउटा उपप्रधानमन्त्री यो यो कसुर भएको कारण राजदूत फिर्ता गरिएको हो भन्ने अर्को जो परारष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकोले अर्कै भन्ने । यो मान्छेपिच्छे फरक कुरा र नौटंकी अनि हाँसीमजाक ठट्टाले न राष्ट्रलाई राम्रो गर्छ न त जनतालाई नै । यो कोणबाट यो सरकार पूर्णतया असफल भएको छ ।
कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनले संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व लिने भनेको थियो । तर मधेसको समस्या समाधान नगरुन्जेल त संविधान कार्यान्वयनले गति लिँदैन । भनेपछि कांग्रेसले मधेसको समस्या समाधान गर्नको लागि के गर्छ ?
पचास प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने भूभागलाई उपेक्षा गरेर संविधानले पूर्णता पाउँदैन । संशोधन गर्नैपर्छ । त्यसमा सहमतिको बाटो निकाल्नै पर्छ । मधेसवादी दलका नेताहरूसँग कुरा हुँदाखेरि पनि उहाँहरू यो वार्ता टोलीसँग पो वार्ता गर्दैनौं भनेका हांै तर वार्ता नै गर्दैनौं भनेका होइनौं भनिरहेका छन् । त्यसकारण वार्ता र संवादद्वारा जसरी समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने हो त्यो भएन । एउटा हाँसीमजाक तथा व्यंग्य बयानबाट समस्याको समाधान हुँदैन । त्यसैले नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्नेहरूका हरेक भाषा र शब्दहरू सभ्य र सन्तुलित हुनुपर्छ । जुन पटक्कै छैन । उखान जता पनि अर्थ लाग्ने खालको हुन्छ । अनि तिक्तता पैदा हुन्छ ।
समाधानको बाटो छोडेर नेपालको राजनीति ध्र्रुवीकृत हुँदै गएको हो ?
म अहिले त के भन्छु भने, जुन संविधान हाम्रै नेतृत्वमा घोषणा गरेका छौं, त्यसमा केही संशोधन गर्नैपर्छ । त्यसको अर्थ यसका मौलिक मान्यतालाई चुनौती दिने काम कहीँ कतैबाट पनि हुनुहुन्न । कार्यान्वयनतिर हामी सबै एकाग्र भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ । अब नेपालको राजनीतिक वाम र लोकतान्त्रिकबीचको ध्रुवीकरण अलि तीव्र हुने खालको संकेत देखिएको छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले पनि छिमेकीहरूबीचमा शीतयुद्ध मच्चाउने खालको भइरहेको छ । यसले हाम्रो हित गर्दैन । त्यसमा सन्तुलन कायम गर्नेतिर सरकार पटक्कै केन्द्रित छैन ।
संविधान कार्यान्वयन गर्नेतिर पनि दलहरू अलिकति ध्रुवीकृत देखिएका छन् । सरकारमै भएका दलहरूका भिन्न विचार र मान्यताको कारण पनि यो देखिएको होइन र ?
यो सरकार चौबाटोमा राखिएको घोडाको बग्गीजस्तो मात्र हो । जसले जता सक्यो त्यतै तान्ने हो । वैचारिक रूपले पनि अन्योलको अवस्था छ । तर पनि हामीले जुन संविधान निर्माण गरेका छौं, हामी सबैको साझा दायित्व हो, यसको कार्यान्वयन । हामी जता भए पनि कार्यान्वयनको निम्ति इमानदार हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो ।
नेपाली कांग्रेसमा तपार्इं हिजो विधि विधानको कुरा उठाउनुहुन्थ्यो । खै आज पनि विधान त पालना भएन ? दुई महिना भयो मनोनयन पूरा भएन त ?
हैन ढिला भएको होला । तर म हिजो जति विधि विधानको पालनाको पक्षमा थिएँ आज पनि त्यत्तिकै कटिबद्ध छु । मैले पार्टीमा जसरी हिजो सानो समूहमा निर्णय गर्ने सिन्डिकेट प्रथा थियो । अब त्यस्तो हुनुहुँदैन भनेर पार्टी सभापतिसँग धेरैचोटी भनेको पनि छु । पार्टी विधि र विधानअनुसार नै चल्नुपर्छ । पारदर्शिता र सहभागिता नै हुनुपर्छ । पार्टीको संस्थागत विकास हुनुपर्छ । त्यसमा सभापति पनि गम्भीर हुनुहुन्छ । अहिलेको समयको चाप पनि त्यस्तै छ । संसदीय दलको निर्वाचन हुनेबित्तिकै हामी संसद्तिर व्यस्त हुनुपर्ने भयो र सभापति पनि केही समय आफ्नै काममा व्यस्त हुनुभयो । एक डेढ महिनभित्र नै ढिला भयो भन्न मिल्दैन ।
उम्मेदवार छनोटमा कमजोरी भएकै हो : प्रदीप पौडेल
पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै संरचना फेर्नुपर्नेछ– गोविन्द पोखरेल